Zlatan: Mustaqbalkayga Kubada Cagta Waxaan Ku Dhamaysanayaa PSG
HomeWararka MaantaZlatan: Mustaqbalkayga Kubada Cagta Waxaan Ku Dhamaysanayaa PSG
Zlatan Ibrahimovic ayaa daboolka ka qaaday inuu doonayo inuu mustaqbalkiisa kubada cagta ku dhamaysto kooxda uu imika la joogo ee Paris Saint-Germain.
Xidigan 32 jirka ah ayaa PSG uga soo wareegay xagaagii 2012 kii naadiga Talyaaniga ah ee Ac Milan, 2 sanno ayaana uga hadhay dhamaadka heshiiska uu kula joogo naadiga , wuxuuse dhinac isaga leexiyey wararka la isla dhex marayay maalmahan ee sheegaya inuu ku biirayo kooxda Parc des Princes.
Isagoo la hadlaya Majalada khaaska u ah kooxda PSG, Waxa ka mid ahaa Hadaladii Ibrahimovic: “Mararka qaar waxaan akhrinaa Joornaalada ama meelaha kale ee wararka lagu baahiyo, Waxaad arkaysaa warar mala awaala oo odhanaya wuxuu u socdaa koox heblaayo.
“Waxaanse si shaki la’aan ah ugu sheegayaa: Inaan ku jiro xaalad farxadeed, Ku faraxsanahay joogitaanka Paris , xaqiiqdiina aanu jirin xiise ii haya meel kale oo aan ku sii qaato oo ku dhamaysto mustaqbalkayga ciyaaraha oo aan ahayn Paris.”
Sideed dhibcood oo nadiif ah oo ay ku hayso hogaanka Ligue 1, PSG ayaa haysata fursad ay ku debaal degto haddii ay badiso ciyaarta maalinta Axada ah ee ay Horyaalka ciyaarayso.
Ibrahimovic, oo garoomada ka maqnaa dhaawac soo gaadhay is aragii koowaad ee Rubuc dhamaadka Horyaalka Yurub oo kooxdiisu la ciyaaraysay Chelsea, ayaa imika rajaynaya inuu ka caawiyo tababare Laurent Blanc gunaanadka xumada horyaalka ee ku soo afjarmaysa ciyaarta bishan May 7-deeda ay is haleelayaan kooxda Rennes.
Arimahaas isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi: “Waxaanu haysanaa fursad kale oo aanu ku hanan karno horyaalka (haddii aanu lumino ta axada). Waxaan rajaynayaa inaan fursad u helo aan ku ciyaaro ciyaartaas. Haddii xaal sidaas noqdana, Waxaan idiin ballan qaadi karaa inaanu ku guulaysanayno horyaalka oo aanu debaal degi doono.”
Ibrahimovic ayaa hogaanka u haya, gool dhalinta horyaalka Ligue 1, isagoo leh 25 gool oo uu magaciisa ku qoray.
Luis Suarez Iyo Martin Skrtel Oo Ku Dhex Dagaalamay Garoonka Tababarka